Ismaaciil Cumar Geelle:- Da'diisu Waa 80 jir, Maantana Wuxuu Ina-leeyahayay Murashaxii Dhalinyarada Ayaan Ahey?
Saturday April 03, 2021 - 14:45:27 in Maqaallo by Wariye Tiriko
Horta yaa inala hadlaaya? muxuu yahay Qofka warka inoo sheegaaya, wa'ayo?
Waa Madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle. Wuxuu bulshada dalka Jabuuti ku leeyahay waa lay yeedhay.
Ismaaciil Cumar Geelle wuxuu markii shanaad inoo sheegayaa in maanta loo yeedhay.hogaamiye madaxweyne umad hogaaminayo khudbada hadalka ah ee uu u jeedinayo shacabka uu madaxweynaha u yahay sifaha siyaasadeed iyo ficiladiisu waxay ka turjumayaan mustawaha mustaq-balka heerka ay laga dhaxli-karo hogaanka uu ku furi-karo shacabka Jabuuti. haddii uu qofku shaqo ka dhigto ama darajo innuu ka dhigto innuu been u arko runta wuxuuna doonaa innuu been run ka dhigo. Dadka isagaa u yeedhay ee inoo sheegayo, waa dhalinyaro isagu soo abaabulay oo reer Jabuuti. maaha dhalinyaro fekerkoodu xor yahay.
Ismaaciil Cumar Geelle da’ahaan wuxuu caga-cagaynayaa siddeetan jir (Da’diisu gaadhaysaa 80 jir), ayaa waxa uu leeyahay ama shacabka Jabuuti iyo ummadaha kale ee soomaalida iyo caalamkaba u sheegay innuu yahayama murashaxii dhalinyarada. Xilli taariikhdu ku beegnayd 1999-kiina mar uu khudbad ka jeedinayey, lana hadlaayey shacabka Dalka Jabuuti wuxuu yidhi.”Waxaan ahey Murashaxii dhalinyarada”. Maaha markii ugu horaysay ee uu yidhaahdo murashaxii dhalinyarada ayaan aheyn ee hore ayuu u yidhi. Xilligaa da’diisu waxay aheyd Ismaaciil Cumar Geelle shan iyo koton jir ayuu ahaa, wakhtigaas uu lahaa murashaxii dhalinyarada ayaan ahey. Maantana wuxuu yidhi murashaxii dhalinyarada Ayaan ahey. Maaha dhalinyaradii 1974kii,1984-kii iyo 1990-kii uu xidh-xidhi jiray ee aqoon ahaan iyo tiknoolijiyada internaydka casriga ah ee manta is ticmalaan dhalinyarada iyo dunida casriga ah ee 2021-ka maaha qaar ismaaciil Cumar Geelow u fekeraaya ama caqligooda maanta guri ama qol madow oo Jabuuti dhex-diisa aad ku dhex-yaskarto. waa dhalinyaro wacdiga maanta aqoon iyo dhan wa-lba oo siyaasadeed ama fahanka hogaamiye doonaaya innuu hogaamiyo ka horeeya iyo mid aqoon ahaan ka badan weeye bulshada Jabuuti iyo umadda soomaaliyeed maanta.
Beentu waa laba. Waxa la yidhaahdaa waa been dhaqan u ah shakhsi qof ah Iyo Been siyaasi ah. Ismaaciil Cumar Geelle waa shakhsi u haysta innuu ka caqli badan yahay ummadda jabuuti oo dhan, aaney jirin cid kale oo isaga dhaanta aanu ku jirin shacabka Jabuuti, been la soo dhoodhoobo ay siyaasada bulsho lagu hogaamiyo ay guul tahay, taasoo caado iyo dhaqan u ah kaliye taliye Ismaaciil Cumar Geelle.
Laba arrimood Ayaynu daaha kaga qaadaynaa horumarka uu sheegay Ismaaciil cumar Geelle innuu gaadhsiiyey shacabka dalka Jabuuti. Bulshada Jabuuti laba arrimod ayaa waligood dhibaato haysata noloshooda ayaa haystay waligood dalka jabuuti. Shifti laba wakhti isu-badela shacabka jabuuti. Middi waa duqsi maalintii cunaaya dadka Jabuuti. Midna waa habeenkii oo kaneeco cunaysa, dhiigana ka jaqaysa hurdo aad ka seexanayn habeenkii dalka Jabuuti. Ismaaciil Cumar Geele wuxuu xukunka Madaxweynimada Jabuuti Hayey 22sano, isagoo horene uga mid ahaa dawladdihii madaxweynayaashii ka horeeyay isaga. Nolosha maanta Jabuuti ka jirta waa laba dabaqadood. Dabaq foqor iyo gaajo dhulka beerka ku haysa iyo dabaqad dheregtay oo sida gofanaha naaxay oo taajiriin ah. Waxaad moodaa in Ismaaciil Cumar Geelle ku nool yahay caalam kale oo aan aheyn dalka Jabuuti. Maanta nolosha bulshada Jabuuti duqsigii kulaylka maalintii ku degi jiray ee ku cunaaya siddii ayey dhibtaas u haysataa dadka jabuuti. Kaneecadii hurdada u diiday habeenkii ee saameyn weyn ku haysa shacabka jabuuti, iyaduna waa siddii. Laba iyo labaatankaa Ismaaciil Cumar geelle xooga ku haystay shacabka jabuuti waa kee horumarka uu idin sheegayo labadii xaaladood ayaa idin cadaynaaya taliska Ismaaciil dhiiga uu ka jaqayo shacabka jabuuti ee wax-ba ka jirin horumarka kacaanka jabuuti shacabka soomaaliyeed iyo bulshada caalamka u sheego wax-ba ka jirin.
Iclaamka beenta ah ee ismaaciil cumar Geelle adduunyada warbaahinta u soo mariyo, taas ayaa idin cadaynaysa in wax alaale iyo wax uu dalka jabuuti ka qabtay aaney jirin. Hore wuxuu u sheegay doorashadiisii tan maanta ka horaysay in aanu mar labaad soo noqonayn. maantana wuxuu yidhi dhalinyarada Jabuuti Ayaan murashax u ahey ayuu yidhi Geelle. Wuxuu dalka Jabuuti ka dhigay dal shuuci ah. Ismaaciil Cumar Geelle beenta ayuu xalaalsaday oo xaggiisa dambi kama aha, waa u dhaqan kataab-nimo. saban xumaad haddii aad maqasho waa Ismaaciil cumar geelle weeye iyo xanuunka caabuqa COVI 19,waa Ismaaciil cumar Geelle.
Faallo:-Wariye Cabdifataax Ismaaciil Caarshe